July 2013 - ♥ ♥ MY GREEN LIFE ♥ ♥
♪♫ Stronger ♪♫
Phyu Lwin July 29, 20135Comments
ဒီတစ်နေ့လည်း သမားရိုးကျဖြတ်သန်းနေကျအတိုင်း နေ့ရက်တစ်ရက်ကို စာအုပ်တွေကြားထဲ၊ အလုပ်တွေကြားထဲ ကုန်ဆုံးရပေလိမ့်ဦးမည် …။ ဘယ်ဆီရောက်နေပြီမှန်းမသိတော့သည့် တစ်စုံတစ်ဦးကို အရူးတစ်ယောက်လို ပြန်လာလေလိမ့်မလား စောင့်မျှော်နေဖို့တော့ သူမ ဘယ်တော့မှ စိတ်ကူးမည်မဟုတ် …။ သူမရဲ့မျက်ရည်ဆိုတာကို မမြင်ဖူးသည့် အပေါင်းအသင်းများကတော့ “စိတ်ဓါတ်မာကျောလိုက်တာ .. ခံစားချက်ဆိုတာရှိရဲ့လား” ဟု တီးတိုးသဖန်းပိုးကြလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်း … သူမကတော့ ခံစားချက်ကို လူသိအောင် ထုတ်ပြလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ …။
ကွန်ပျူတာထက် တချောက်ချောက်ရိုက်နေသည့် စာလုံးတွေထက်မှာ နာကျည်းမှုတွေ ၊ အလွမ်းတွေ၊ အချစ်တွေ မပါဝင်စေခဲ့တာ ကြာပြီပဲ …။ ဘာကြောင့် အလုပ်တွေကြိုးစားနေရပါသလဲဆိုလျှင် အများစုကတော့ မခံချင်စိတ်ကြောင့်ဟု ခေါင်းစဉ်တပ်ချင်တပ်ကြပေလိမ့်မည် ..။ တကယ်တော့ မဟုတ်ခဲ့ပါ ..။ သူမသည် ဟိုးယခင်ကတည်းက အောင်မြင်ချင်ခဲ့သူ၊ အောင်မြင်အောင်ကြိုးစားခဲ့သူ၊ ထိုအောင်မြင်မှုတွေနောက်ကို လိုက်ပါကြိုးစားရင် အချစ်ဆိုတာကို မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်ဖြစ်ခဲ့သူ ..။
ချန်ခဲ့သူက ချန်ခဲ့ချိန်ရောက်မှ သူမ၏ ကြိုးစားမှုများကို မခံချင်စိတ်တစ်ခုကြောင့်ဟု ခေါင်းစဉ်တပ်မခံနိုင်ပါ..။ ဘ၀မှာ အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်ကိုရောက်ဖို့ ကိုယ့်ခြေကိုယ့်လက်များဖြင့်သာ လျှောက်လှမ်းလိုသော သူမအတွက် အခြားသူတစ်ဦး၏ စိတ်အားဖြင့်သော်မှ တွန်းအားတစ်ခုမလိုချင်ခဲ့ပါ…။
“သတိရနေသေးလား” ဟုများ တစ်စုံတစ်ယောက်က မေးလာပါလျှင် … စဉ်းစားစရာမလိုဘဲ “absolutely no” ဟုသာ ပြန်ဖြေဖြစ်မည်ဖြစ်သည် …..။ တစ်ချိန်တုန်းက ချစ်ခဲ့ဖူးပါသည် ဆိုသည်နှင့်ပဲ လုံးဝမသက်ဆိုင်တော့သော လူတစ်ယောက်ကို ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး သတိရနေဖို့ဆိုသည်မှာ မဖြစ်နိုင်သည့်အရာပေပဲ …။ လွမ်းစရာရှိလျှင် နာစရာနဲ့ဖြေရအောင်လည်း လွမ်းဖို့တောင် ထိုက်တန်သူဟုတ်ပါလေစ …။ စကတည်းက ဒီနိဂုံးကို နိမိတ်ဖတ်သလို ကြိုမြင်နေသည့်အတွက် သူမ၏ မနောအာရုံကို ကျေးဇူးတင်ရပေလိမ့်မည်..။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် …. ခွဲခွာချိန်မှာ ကြိုသိနေသည့် လမ်းခွဲတစ်ခုအတွက် အနည်းငယ်တော့ စိတ်ဒဏ်ရာသက်သာခဲ့ပါသည်….။
“ပိုလှလာတယ်… အဆင်ပြေတယ်မဟုတ်လား” စသည့် အလ္လာပ သလ္လာပစကားများကိုသော်မှ ဆက်လက်မကြားချင်တော့ပေ ….။ ကွယ်ရာကနေ သူမ၏ ဘ၀ဖြတ်သန်းနေပုံများကို တစေ့တစောင်းနားစွင့်နေတာကိုလည်း မလိုချင်ပြန် ….။ လှည့်ထွက်သွားပြီးမှ ပြန်ကြည့်နေတတ်သည့်သူမျိုးသည် ဘယ်လိုလူအမျိုးအစားလဲဆိုသည်ကိုလည်း သူမ ခေါင်းရှုပ်ခံစဉ်းစားမနေလိုပါ ….။ အတိတ်ဆိုသည့်အရာမှာ ပြန်လှည့်ကြည့်နေလို့လဲ … ကောင်းကျိုးတစ်ခုမှ ပေးမည့်အရာမဟုတ်သည့်အတွက် လက်ရှိကာလကိုပဲ သူမတန်ဖိုးထား ရပေလိမ့်မည်…။ ထိုအခါ အတိတ်ထဲမှာ ကျန်ခဲ့သည့်သူတစ်ယောက်ကို ပြန်လည်တမ်းတနေဖို့ဆိုသည်မှာ … ကြည့်ဖူးပြီးသားရုပ်ရှင်ကား ကို ပြန်ကြည့်သကဲ့သို့ ဘာစိတ်ခံစားမှုမှ ရှိနိုင်မည်မဟုတ် ….။
♪♫ …. You think you got the best of me
Baby you don't know me, cause you're dead wrong …. ♪♫
ချစ်လျက်နှင့် သေကွဲဖြစ်စေ ရှင်လျက်ဖြစ်စေ ကွဲကွာဝေးသွားကြသော ချစ်သူစုံတွဲတွေ အများကြီးရှိရက်နှင့် .. သူနှင့်သူမကိုမှ ကံကြမ္မာရယ် ခွဲရက်လေခြင်း ဟု အပြစ်တင်စရာလည်း လိုမည်မထင် ….။ အတိတ်ကို မေ့ထားလို့ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းသော ဘ၀တစ်ခုကို စိတ်တိုင်းကျ ထုဆစ်ရင်း …. ရှေ့ဆက်လှမ်းမည့် ပန်းတိုင်တွေကို မျှော်ကြည့်နေသူတစ်ယောက်အတွက် အရာအားလုံးကလည်း သာသာယာယာပါပဲ….။ ။
_/\__ ~ အမှတ်တရတွေနဲ့ ပုဂံမြေ ~ _/\__
Phyu Lwin July 26, 20134Comments
ပုပ္ပားကနေ ပြန်လာခဲ့ပြီးတော့ … ဗျတ္တပန်းဆက်လမ်းကနေ ပုဂံကို ဆက်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်..။ သိပ်မဝေးဘူးထင်ထားတာ ပုပ္ပားနဲ့ ပုဂံက ဝေးတော့ဝေးတာပဲ …။ အဲဒါနဲ့ အရင်ဆုံး ညောင်ဦးကို ပထမနေ့နေ့လည်မှာပဲ ရောက်သွားတော့ နေ့လည်စာစားပြီးတာနဲ့ ဘုရားစဖူးပါတယ်..။ ပထမဆုံးသွားဖူးတဲ့ဘုရားက ဓမ္မရံကြီးဂူဘုရားပါ..။ အရင်က အဲဒီဘုရားပေါ်ကနေကြည့်ရင် ပုဂံမြို့အလှကို အကောင်းဆုံးမြင်နိုင်တယ်လို့ ပြောကြပါတယ်..။ ပြီးတော့ အဲဒီဘုရားက ပုဂံဘုရားစေတီတွေအားလုံးမှာ ထုထည်အကြီးဆုံးလို့လဲ အရင်ကတည်းက သိဖူးခဲ့ပါတယ်.။ အခုသွားတော့ ဘုရားရဲ့ရေရှည်ခိုင်ခံ့မှုကို ဦးစားပေးတာရယ်.. ဘုရားဖူးတွေ အန္တရာယ်ကင်းဖို့ရယ် ဘုရားပေါ်ကို တက်ခွင့်မပြုတော့ပါဘူး...။ အခုဆိုရင် ပုဂံမှာ ဘုရားစောင်းတန်းတွေကနေ တက်ခွင့်ပြုတဲ့ဘုရားဆိုလို့ ရွှေဆံတော်ဘုရားရယ် မင်္ဂလာစေတီရယ်လောက်သာ ခွင့်ပြုတော့တာပါတဲ့..။
ဘုရားတွေတော်တော်စုံအောင်ဖူးခဲ့ပေမယ့် စွယ်တော်လေးဆူတော့ စုံအောင်မဖူးဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ တန့်ကြည်တောင်က မြစ်တစ်ဖက်ကမ်းမှာ စက်လှေနဲ့သွားရမှာဆိုတော့ အချိန်လည်းသိပ်မရတာနဲ့ မသွားဖြစ်ခဲ့ဘူး....။
ဧရာဝတီမြစ်ရဲ့အလှကတော့ မြင်ရတာ စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းတယ်..။ ဒီမြစ်ကြီးကိုမြင်ရင် မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံး ပျော်ကြရတာ သူက နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားတွေရဲ့ နှလုံးသားထဲ တော်တော်နေရာယူထားနိုင်တယ်နော်..။ ကျမကတော့ ဧရာဝတီကို သက်မဲ့မြစ်တစ်စင်းဆိုတာထက် သက်ရှိမိသားစုဝင်တစ်ဦးလို .... သူ့ကို ရေတွေနဲ့စီးဆင်းနေတာမြင်ရတိုင်း ပျော်ရွှင်မိသလို ... မြစ်ကျဉ်းသွားတဲ့နေရာတွေ... သောင်ထွန်းနေတဲ့နေရာတွေမြင်ရရင်တော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်..။
ကျမက မြန်မာနိုင်ငံပြန်ရောက်နေတဲ့အတွင်း ဆရာမခင်ခင်ထူးရဲ့ စာအုပ်တွေတော်တော်ဖတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်..။ ဆရာမရေးတာ ရိုးရိုးလေးနဲ့ သူနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်က စရိုက်သဘာဝလေးတွေကို ဖော်ကျူးတတ်တယ်..။ အဲဒီထဲမှာ ဗူးဘုရားက မြစ်ဆိပ်ကလည်း အမြဲပါတော့ ဗူးဘုရားရောက်တဲ့အခါ ဆရာမရဲ့ စာအုပ်တွေထဲက ဇာတ်ကွက်တွေတောင် ပြန်မြင်လာမိသလိုလို....။
နောက် ကြိုးတန်းဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းထဲက ဇာတ်အိမ်တည်တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့ လောကနန္ဒာဘုရားဘေးက ဧရာဝတီမြစ်ကမ်း ... အခုထိလည်း သောင်ပြင်ဖွေးဖွေးနဲ့ လှပဆဲ ..။ ဘုရားမှာ နွားနို့စစ်စစ်တွေဆိုပြီးရောင်းတာရော.... ပုဇွန်ကြော်၊ ငါးကြော်သည်လေးတွေလည်း အရင်အတိုင်းရှိနေဆဲ ...။ ဘုရားသမိုင်းရှင်းပြမယ်ဆိုတဲ့ကလေးလေးတွေလည်း အရင်လိုရှိနေဆဲ ...။
အချိန်တွေသာ ကြာသွားခဲ့ပေမယ့် ပုဂံက ဟိုးတုန်းကသွားဖူးခဲ့သလို ဘာမှမပြောင်းမလဲရှိနေဆဲ ..။ တက္ကသိုလ်တက်တုန်းက ကျောင်းက လေ့လာရေးခရီးလိုက်ပို့ဖူးတယ်...။ အမြန်အမြန်နဲ့ ဘုရားတစ်ဆူကို ၁၀ မိနစ်လောက်အချိန်ပဲပေးပြီး.... သူငယ်ချင်းတွေ ၀ရုန်းသုန်းကားပြေးလွှားခဲ့ကြဖူးတယ်....။ ငယ်သေးတဲ့အရွယ်ဆိုတော့ အကြောက်အလန့်မရှိ .. ဘုရားအပေါ်ဆုံးထိ အလုအယက်တက်ကြဖူးတယ်....။ ဗူးဘုရားလှေဆိပ်ကနေ တစ်ဖက်ကမ်းကို သီချင်းတွေ အော်ဟစ်ဆိုကြပြီး စက်လှေနဲ့ တပျော်တပါးသွားခဲ့ဖူးတယ်...။ အင်္ကျီတွေရောင်စုံဆင်တူတွေဝယ်ကြပြီး ခရီးစဉ်တစ်ခုလုံး အဲဒီအင်္ကျီတွေပဲဝတ်ပြီး ... ပျော်ရွှင်ရယ်မောခဲ့ကြဖူးတယ်.....။
ဒီဘုရားကတော့ သိပ်လူသိမများတဲ့ဘုရားစေတီတစ်ဆူပါ..။ ကျမလဲ အမည်မမှတ်မိတော့ဘူး..။ သွားခဲ့တာကများတော့ အကုန်မမှတ်မိတော့ဘူး...။
ဒုတိယရက်မနက်မှာတော့ ရွှေစည်းခုံဘုရားကနေ စပြီး ဘုရားဖူးပါတယ်...။ အဲဒီဘုရားမှာ လေ့လာစရာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်...။ သမိုင်းစိတ်ဝင်စားသူဆိုရင် စာတမ်းရေးဖို့ အင်မတန်ကောင်းမှာပါ...။
ပုဂံက ဘယ်နှစ်ခါပဲရောက်ရောက် အမြဲသွားချင်နေတဲ့နေရာပါ..။ ဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားခဲ့တဲ့ကြီးကျယ်တဲ့ နယ်မြေ၊ ဘုရားတွေလက်ညှိုးထိုးမလွဲအောင်တည်ရှိတဲ့ဒေသ၊ ပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖြစ်တည်လာ တဲ့အရပ်၊ မြန်မာတွေအတွက် ဂုဏ်ယူရတဲ့ သမိုင်းအမွေအနှစ်တွေ ရှိတဲ့မြို့.. နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့စကားပြောဖြစ်ပြီဆို ပုဂံကိုသိတယ် သွားချင်တယ်လို့ပြောလေ့ရှိတဲ့နေရာ..။
အခုတခါက ၃ ခါမြောက်ရောက်ဖူးခြင်းပါ..။ ကျောင်းတုန်းက တခါ.. ကျောင်းပြီးတော့ သုတေသနအတွက် တခါရောက်ဖူးတယ်... အခုတခေါက်ကတော့ မိသားစုနဲ့အလည်သက်သက်...။ ခြုံပြောရရင် ကျမ အရမ်းပျော်ခဲ့ပါတယ်..။ အဖေနဲ့အမေကို ဒီတစ်ခေါက်ပြန်ရောက်ရင် ထပ်သွားကြရအောင်ဆိုပြီး ပြောထားခဲ့သေးတာ...။ ဘုရားပုံတွေအများကြီးတော့ရှိသေးတယ်..။ အရမ်းရှည်သွားမှာစိုးတာနဲ့ ဒီလောက်နဲ့ပဲ ရပ်လိုက်တာပါ..။ ပြီးတော့ ကင်မရာကလည်း သိပ်မကောင်းတေ့ာ့ ပုံတွေက အပြင်မှာလောက် သိပ်မပီပြင်ဘူး...။ သမိုင်းတွေမရေးတာက သေချာမသိတော့ အမှားတွေပါသွားမှာ စိုးရိမ်မိတာကြောင့်ပါ..။
အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်ရှင် :)
မပြယ်တဲ့ ... သစ္စာ (၃) ~~~
ဘယ်သန်တို့အကြောင်း တစေ့တစောင်း ..
မျက်လုံးတွေအောက်က ဘ၀တွေ ~~~
♥ စိတ်ကူးထဲက တနေ့တာ ♥
Memorable Visit to Mt. Popa